Igosa, uXiaomi ubhengeza ukubonakaliswa kweMi 9 nge-24/02 | I-Androidsis
Igosa, uXiaomi ubhengeza ukubonakaliswa kweMi 9 nge-24/02
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izaziso, Xiaomi
Besiyilindile. Umhla we ukumiliselwa kweXiaomi Mi 9 Kwakusondele kakhulu, kwaye kuya kuba njalo. UXiaomi ubhengeza ngokusesikweni kuthungelwano lwabo loluntu eNgomhla wama-24 kuFebruwari ngumhla okhethiweyo ukuboniswa kweMi 9. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sigqabaze ukuba kunokwenzeka ukuba le modeli ifike kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola eBarcelona. Nangona usuku olulungileyo luza kuza ekugqibeleni kwaye sinokuyonwabela kwindawo yokuma.
UXiaomi ngokusebenzisa iiakhawunti zakhe ezisemthethweni ibinguye oqinisekisile umhla. Kwaye ikwasibonisile ezinye iifoto ezinembonakalo entle. Imodeli eluhlaza okwesibhakabhaka esiyibonayo ibonisa imigca enomtsalane, enkulu Umboniso we-Amoled kunye nenye into ebonakala ngasemva, a ifoto kathathu yekhamera.
1 UXiaomi ubeka umhla wayo ngaphandle kwezakhiwo
2 IXiaomi Mi 9 yalatha kwifashoni yeekhamera ezi-3
3 Amandla kunye nobuhle ngesandla
UXiaomi ubeka umhla wayo ngaphandle kwezakhiwo
Ewe, kuqinisekisiwe, siya kuba nenyanga kaFebruwari egcwele iindaba. Ummangaliso kubo bonke abalandeli behlabathi le-smartphone. Sele siziphosile iindaba kwicandelo kwaye iindaba ezimnandi ziyavunywa. Kodwa konke ngaxeshanye? Njengoko sisazi, kuba sikwazisile kaninzi, umhla UFebruwari 20 ngumhla osemthethweni apho iSamsung izakwazisa khona usapho lwayo olutsha Galaxy S10. Kodwa ngaba kunjalo kwangolo suku 24INokia yayisele ibhengezile ukubonakaliswa kwe-smartphone yayo enekhamera eneekhamera ezintlanu, iNokia 9 Mash View.
Le nyanga kaFebruwari iyakuba namandla kakhulu ngokweendaba, ukusukela Kwiintsuku ezi-4 siya kudibana ukuya kwizixhobo ezi-3 ezilindelwe kakhulu. Kwaye kanye emva koku, i-MWC yalo nyaka izakuqala, apho iindaba ezivela kwezinye iifemu ezininzi kulindeleke nazo. Umhla wemfazwe uvulekile, iintetho ngokuqinisekileyo ziya kunyathela omnye komnye. Ke Lixesha lokonwabela ukubheja okutsha kwenkampani nganye.
IXiaomi Mi 9 yalatha kwifashoni yeekhamera ezi-3
Yiloo nto ekuboneni kokuqala etsala ingqalelo xa ubona imifanekiso yokuqala yeXiaomi Mi 9. Iilensi ezintathu zibekwe nkqo kwicala lasekhohlo lomqolo. Apha ngezantsi kukho ifayile ye- Isibane se-LED, Kwaye nokungabikho kuyabetha, umfundi weminwe. Le yona ayikho ngasemva Ingabonisa ukuba esi sixhobo sele sinomfundi ofunda ngeminwe phantsi kwesikrini, ngokungathandabuzekiyo inoveli eya kwamkelwa ngabasebenzisi.
Ikhamera yeXiaomi Mi 9 iphakathi kwezona zinto zibalulekileyo. Ukuza kuthi ga ngoku, ababaninzi abavelisi abanesibindi sokuxhobisa iiterminal zabo ngeelensi ezintathu. Ngokuqinisekileyo emva kwenyathelo eliya phambili likaXiaomi abanye abaninzi balandela ekhondweni lakhe. Ukuba ubulindele i-smartphone ngekhamera enamandla, i-Mi9 inokuba lolunye ukhetho lwakho.
La eyona khamera Inzwa, hayi ngaphezulu okanye ngaphantsi Isisombululo se-Megapixel engama-48. Apha ngezantsi, i isivamvo yesibini yelensi yesibini inayo Isisombululo se-Megapixel se-12. Kwaye i ilensi yesithathu une ikhamera ebizwa ngokuba yi-3D ToF (Ixesha leNqwelomoya) ngenkuthazo ecacileyo esiyifumana kwiHonor View 20.
Amandla kunye nobuhle ngesandla
Phakathi kwezinye izibonelelo esinokuziqaqambisa zezi: iprosesa yakho. IXiaomi Mi 9 iya kubaleka kunye IQualcomm Snapdragon 855I-chip nayo ilindelwe ngamandla kunye nokusebenza kwayo. Iya kuba nesinxibelelanisi Uhlobo C lwe-USB, kwaye inyamalale, kulandela imeko, i-headphone jack port. Iyahambelana nayo 27 W ukutshaja ngokukhawuleza.
La Unxibelelwano lweNFC Iya kubakho ukubonelela nge-Mi 9 ngeempawu zobume obukrelekrele. Ibhetri yakho iya kuba 3.500 mah, umthwalo ongenakukhangeleka ngathi yinto enkulu, kodwa enkosi kulungelelwaniso oluhle kakhulu lwezinto zithembisa ukusebenza ekuphakameni okuseleyo.
Ukujonga amandla eXiaomi Mi 9, ukongeza ekubeni yenye yeetshipsi zamva nje zeQualcomm. Inefayile ye- 6GB RAM, ezihambelana nomthamo we Ukugcinwa kwe128GB. Konke oku kuphantsi kwesihluzo se Uluhlu lwe-MIUI 10 njengoko sele sazi, ihamba ngokumangalisayo.
Okokugqibela, ukuba sijonga isikrini sakho, kwaye izinto zihlala ziba ngcono. Iphaneli ye-Amoled ene-intshi ye-6,4 ye-dragonal. Iglasi enohlobo lwamva nje lokhuseleko oluqinisekisiweyo I-Corning i-Gorilla Glass i-5. Kwaye apho sifumana i- inotshi encinci emise okwehla ukuba sathanda kakhulu. Ngaba awulangazeleli ukudibana naye ngesiqu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Igosa, uXiaomi ubhengeza ukubonakaliswa kweMi 9 nge-24/02
Izaqhwithi eziphezulu kunye nemigca ye-zip ifumana utshintsho olukhulu kuhlaziyo lwamva nje lwe-Fortnite
I-Samsung Galaxy M20 inokuthi ifike eYurophu kungekudala